Liiska taleefannada cusbooneysiin doona Android 9.0 Pie dhawaan | Androidsis
Android 9.0 Pie hadda waa run, inkasta oo imaatinkiisa uu ahaa kii ugu lama filaanka ahaa. Google wuxuu soo bandhigayaa daabacaadda cusub ee nidaamkeeda hawlgalka, iyadoo isbeddello badan iyo horumarin badan lagu sameeyay. Cusbooneysiinta ayaa horeyba loogu diyaariyey adeegsadayaasha Google Pixel, Telefoonka Muhiimka ahna wuu layaabay inuu noqdo taleefankii ugu horreeyay ee cusbooneysiiya. In kasta oo dhowaan ay jiri doonaan moodallo badan.
Anaguna waanu haysanay liistada casriga ah oo dhameystiran oo awoodi doonta inay cusbooneysiiso Android 9.0 Pie muddo yar kadib. Marka taleefankaagu wuxuu noqon karaa mid ka mid ah moodooyinka liiskan ku yaal. In kasta oo aanu ahayn liis soo bandhigaya wax lala yaabo.
Tan iyo markii Telefoonada qayb ka ahaa Android P betas ayaa noqon doona kuwa soo socda ee la cusbooneysiiyo. In kasta oo xilligan aan taariikh la siin iyaga. Si fudud ayaa looga faallooday inay qaadan doonto dhowr toddobaad in la gaaro taleefannadan. Liiska oo dhameystiran waa sida soo socota:
Telefoonka Aasaasiga ah
Moodooyinkaani ma noqon doonaan kuwa kaliya ee ku raaxeysta Android 9.0 Pie dhawaan. Google ayaa sidoo kale xaqiijisay in lagu daydo Android One waxay helayaan fursaddan. Hab wanaagsan oo lagu riixo noocyadan nidaamka qalliinka suuqa. Moodooyinka ay tahay inay helaan cusbooneysiinta kahor dhammaadka sanadka waa:
Mar labaad, Ma jiraan taariikho cayiman oo loogu talagalay Android 9.0 Pie si loo gaaro moodooyinkaas. Maaddaama ay ka faalloonayaan Google waxay heli doonaan kahor dhammaadka sanadkan, laakiin waxaan u qaadaneynaa inay ku xirnaan doonto nooc kasta. Waxay u badan tahay, moodooyinka Nokia inay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee cusbooneysiiya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Liiska taleefannada ku habboon Android 9 Pie
Cusbooneysiinta Telefoonka Aasaasiga ah ee loogu talagalay Android 9.0 Pie